Xushmeynta George Floyd: Milicsiga Shakhsiyeed ee Shaqaalaha McKnight
McKnight wuxuu ka kooban yahay dadka ku nool, ka dhex shaqeeya, daryeelna u leh beeshan. Annaguba, shaqsiyan, waxaan la kulanay xanuunka, naxdinta, iyo culeyska dilkii George P. Floyd, waxaana saameyn ku yeeshay xisaabinta midab takoorka ee dhacday. Nolosha ninkan, aabihiis, walaalkiis, wiilkiisa, iyo saaxiibkiis ayaa sii wada inay dhiiri geliyaan sida ay nooga go'an tahay abuuritaanka sinaan Minnesota ah oo uu u qalmay, qof walbana aanu u malayno.
Iyadoo la rajeynayo sannad-guuradan, Aasaasku wuxuu abuuray koox-hawleed gudaha ah si loo tixgeliyo sida McKnight u sharfi karo xilligan. Talooyinka kooxda shaqada awgeed, Aasaasku wuxuu ku dhawaaqay $1 milyan oo deeq ah 10 hay'adood oo ka shaqeeya dhisidda soo dhawayn iyo sinnaan Minnesota ah. Wax badan ka baro ururada.
Waxaan sidoo kale ka codsanay kooxdayada inay ka fekeraan waxa loola jeedo ka mid ahaanshaha iyo daryeelida beesheena, iyo sida ay u doonayaan inay u sii wadaan inay muujiyaan la-hawlgalayaasha samafalka, deriska, iyo dadka ka shaqeynaya sidii loo hormarin lahaa cadaalad, hal abuur, iyo mustaqbal baaxad leh dhamaanteen. Toddobaadyada soo socda, waxaan ku cusbooneysiin doonnaa boggan milicsiga shaqsiyadeed.
George Floyd Ayaa I Sameeyay
Waxaan rabaa in xasuustiisu adigana ku dhaqaajiso.
Waxaa qoray Tonya Allen
Waxaan u soo dhaqaaqay halkan maxaa yeelay George Floyd, oo ah ninka, ayaa astaan u ahaa dhaqdhaqaaqa.
AKHRISO TILMAANTA TONYA
Waxaa qoray Funlola Otukoya
Saaxiib baa dhawaan i weydiiyay
fudud oo muuqata, haddana
adag, su'aal: "Sidee raaxo leh
adigu awood ma leedahay?
Akhriso Milicsiga Baashaalka
Waxaa qoray Kim Anderson
Hooska ayay taagan tahay. Daawashada.
Daawashada sida nin madow uu neeftiisa ugu dambeysa uga qaado jilibka nin ku dhaartay inuu ilaaliyo una adeego bulshadiisa.
AKHRISO FIKIRKA KIM
Waxaa qoray Tim Murphy
Bulshadu waxay si maldahan u xireen gacmaha waxayna doorteen geesinimo, sababtoo ah sida kuwa kale oo badan oo ay waxyeello u geysteen cadaalad -darrada waagii hore, wax kale oo aan haysano ma jirin.
AKHRISO TIXGALINTA TIM
Loogu talagalay Fanaaniinta & Dhaqanka Xambaarsan
Bulshadu waa la farsameeyay. Waxaan u mahadcelinayaa hal-abuurkeenna iyo dhaqankeenna sida:
yaa nagu jecel cod dheer iyo xaflad…
AKHRISO ARRIMAHA ARLETA
Waxaa qoray Karyn Sciortino Johnson
Oohin wanaagsan ayaa si qoto dheer ugu kulmaysa nafta, iyada oo gariirinaysa oo daadineysa webi ilmo kulul oo wejiga ka soo daadanaya…
AKHRISO DIB U HESHIISKA